Maxay Waxbarashada Nabadda Naga Baran Kartaa Dib-u-habaynta Booliska? - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Waxaa qoray Monisha Bajaj
Kadib dilkii foosha xumaa ee George Floyd loogu gaystay Minnesota horaantii sanadkan — intii aduunku gabood ka dhiganayay isla markaana laga daawaday fiidiyowga fayraska — dib-u-habeyn ballaaran ayaa ka socota Minnesota iyo meelo kale si loo difaaco loona beddelo ciidamada booliiska. Gobolka Minnesota, bil ka dib dhimashadii Floyd, Golaha Degaanka ayaa u codeeyay in laga takhaluso booliska. Waxay soo jeediyeen oo ay ka doodayaan abuuritaanka Waaxda Badbaadada Bulshada iyo Kahortagga Rabshadaha taasi waxay lahaan doontaa "saraakiil nabadeed" oo ka jawaabi doona xaaladaha degdegga ah.
Ciidamada booliska ee Mareykanka xididdo ku leeyihiin ilaalada addoonka taasoo si xoog leh u fulisay xeerarka addoonsiga aadanaha. Dunida oo dhan, waxaan ka aragnaa rabshadaha bilayska oo aan la xakameynin oo baahsan Brazil ilaa Hindiya Dib-u-habeynta ka dhacda hal meel ayaa hubaal saameyn ku yeelan karta dib-u-habeynta meelo kale. Sidan oo kale, waa wakhti ku habboon fikradaha ka imanaya barashada nabadda si loogu wargaliyo sida booliiska loogu tababaro shaqooyinkooda cusub.
Sida barafasoorka nabadda iyo waxbarashada xuquuqda aadanaha, Waxaan ku doodayaa in ciidamada cusub ee "nabaddu" ay tahay inay ka yimaadaan faham buuxa oo nabada laga qabo. Martin Luther King, Jr. mar uu yiri "nabada kaliya ma ahan maqnaanshaha xiisadda, laakiin joogitaanka cadaaladda." Tani waxay la jaanqaadeysaa qeexitaanka guud ee nabada ee aqoonyahanada sida Betty Reardon iyo Johan Galtung ay soo saareen in nabada loo sameeyay iyadoo wax laga qabanayo kaliya rabshadaha tooska ah (kufsiga, dagaalka, naxariis darada booliska, jirdil), laakiin sidoo kale iyadoo la baabi'inayo rabshadaha qaab dhismeedka sida dhaqaalaha, Farqiga u dhexeeya waxbarashada iyo caafimaadka oo inta badan sababa cunsuriyada, gumaysiga, iyo noocyada kale ee dulmiga. Waxaan sidoo kale ku qasbanaaneynaa inaan ku badalno dhaqamada rabshadaha iyadoo loo marayo waxbarashad lagu tilmaamayo ka sheekaynta sheekooyinka nabada, iskaashiga, iyo midnimada halkii laga badali lahaa rabshadaha iyo xukunka.
Marka la eego baahida loo qabo saraakiishan cusub ee "nabada" inay helaan faham buuxa oo ku saabsan nabada, halkan waxaa ku yaal xoogaa talooyin ah oo ku saabsan waxa u baahan tababarkooda.
Fahamka xasaasiga ah ee taariikhda rabshadaha, khilaafaadka iyo sinnaan la'aanta bulshada dhexdeeda. Saraakiisha nabaddu waxay u baahan yihiin inay fahmaan xididdada iyo saameynta hadda jirta ee qaababka sinnaan la'aanta ha ahaato mid ku saleysan isir, jinsi, isir, dabaqad, diin, ama jinsi. Buugaagta iyo agabyada kale ee waxbarashadu waxay ku siin karaan aragti cusub aragtiyo badan oo ku saabsan taariikhda kuwaas oo cod siinaya sheekooyinka la takooray. Tusaale ahaan dalka Mareykanka, buugaagta sida Taariikhda Dadka Mareykanka iyo Taariikhda Dadka Asaliga ah ee Mareykanka (mid kasta oo leh daabacaadda akhristayaasha da'da yar sidoo kale) waa meel fiican oo laga bilaabi karo in laga fahmo taariikhda cakiran ee xiriirka jinsiyadaha iyo xasuuqa dadka asaliga ah ee Mareykanka Waqtigan xaadirka ah, qeybaha booliska badankood uma baahna shahaado kulliyad (kaliya dibloomada dugsiga sare ama GED). Taa baddalkeeda, saraakiisha nabaddu waa inay lahaadaan ugu yaraan shahaado kulliyadeed bulshada oo leh shaqo koorso oo ku saabsan xiriirka jinsiyada, shaqada bulshada, cilmiga bulshada, xalinta khilaafaadka, iyo / ama daraasaadka qowmiyadeed.
Xarunta Damqashada iyo Wadajirka. Tababbarka saraakiisha nabaddu waxay u baahan tahay inay u oggolaato iyaga inay kobciyaan fahamka saameynta nafsiyeed iyo shucuureed ee rabshadaha ku saabsan beelaha la hayb sooco. Faham qoto dheer oo ku saabsan sida bulshooyinku ula tacaalayaan culeyska sunta leh ee sinaan la'aanta qaabdhismeedka sida midab-takoorka ama is-xukunka, iyo sidoo kale waxyeelo caafimaad maskaxeed rabshadaha bilayska ee jiilalka dhex-dhexaadin rabshad leh, waa in laga gaabiyo dadaallada lagu abuurayo kalsoonida iyo isfahamka ka dhexeeya saraakiisha nabadda iyo bulshada ay u adeegaan. Tusaale ahaan Hindiya, barashada xuquuqda aadanaha waxay aalad u ahayd qalabaynta bulshooyinka Dalit (oo horey loogu yeeri jiray "lama taabtaan") bulshooyinka aqoonta, xirfadaha, iyo istiraatiijiyadda ay ugu doodayaan caddaaladda (Bajaaj, 2010; Bajaaj, 2011).
Xirfadaha Isbadalka Khilaafka. Saraakiisha nabaddu waa inay fahmaan asalka rabshadaha si ay u fahmaan siyaabaha kala duwan ee colaadaha loo yareyn karo. Tusaale ahaan, dariiqooyinka sida dib-u-soocelinta caddaaladda iyo la xisaabtanka bulshada waxay noqon karaan habab awood badan oo lagu gaaro caddaalad ka duwan kan xabsi-warshad-dhisme faa'iido ku dhisan. Fahmitaanka sida shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kaladuwan ay u wajahaan isku dhaca, wadahadalka, nabadaynta iyo wadajirka kooxaha u dhexeeya ayaa bixin kara habab badan oo lagu soo celiyo "nabadda" markii xadgudub dhaco. Tusaale ahaan, shaqadeeda ragga xidhan ee lagu xukumay kufsiga, haweeneyda iyo u ololeeyaha cadaaladda taranka iyo baraha xuquuqda aadanaha Loretta Ross waxay ka hadlaysaa sida loo marayo wada hadaladooda, nimankan waxay ka wada hadleen gardarradooda iyo sidoo kale sida badanaa loogu dhibaateeyo sidii carruurta yaryar; iyada oo loo marayo habka bogsashada ee wadaagga, waxay sameeyeen barnaamijkii ugu horreeyay ee ka dhanka ah galmada ee ay hoggaamiyaan ragga Maxaabiista Ka Soo Horjeeda Kufsiga in 1970s ah.
Dhageysi qoto dheer. Kahor intaanan u boodin gabagabada inta badan salka ku haysa eex aan qarsoodi ahayn, saraakiisha nabadda waa in loo tababbaray dhageysiga iyo fahamka waxa dhacaya. Ka waran haddii sarkaal booliis ah Derek Chauvin uu dhageysan lahaa George Floyd's sharaxaad kadib markii lagu eedeeyay dhiibida lacag dhan $ 20 oo been abuur ah halkii aad qoorta ugu jilba dhigi lahayd ku dhawaad ​​9 daqiiqo? Farsamo yaqaan qolka gurmadka Breonna Taylor ayaa albaabka hore ee qasabka ayaa si qasab ah lagu furay bishii Maarso ee sanadkan iyada oo "waaritaan la’aan ah" Kentucky ka hor intaan su'aal la weydiinin ama laga jawaabin, askartu waxay ku toogteen sideed jeer dhimashadeeda. Dalka Hindiya bishii Juun ee sannadkan, aabbe iyo wiil ayaa la xiray iyagoo lagu eedeeyay inay dhaleeceeyeen qaabkii booliisku u maareeyay fulinta xakamaynta COVID; ay ahaayeen la jirdilay lana dilay intii ay booliska ku jireen. Dhageysigu wuxuu marka hore ogolaanayaa in si weyn loo cadeeyo xaalada, halkii laga noqon lahaa xukun deg deg ah oo dila oo badiyaa dhacda inta badan kulamada booliska ee beelaha la heyb sooco Dhageysiga qotada dheer wuxuu kaloo ogeysiin karaa howlaha dib uheshiisiinta sida taariikhada South Africa ee Runta iyo Dib uheshiisiinta sanadihii 1990, iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in runta looga sheego Mareykanka (sidoo kale eeg Mashruuca Runta Sheegta waxaa aasaasay aqoonyahan cilmiga nabada Dr. David Ragland).
La Xisaabtanka Bulshada. Inta badan saraakiisha booliska, ugu yaraan Mareykanka, ha ka imaan ama ha deggane bulshada ay u adeegaan. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha dowladu waxay leeyihiin “shuruud degenaansho” si ay ugu noolaadaan bulshada ay doorteen ama loo magacaabay inay u adeegaan (tusaale ahaan, Mareykanka, eeg Shuruudaha Boston). Saraakiisha nabada waa in laga doonayaa inay ku noolaadaan magaalooyinka ay u adeegaan. Markay arkaan carruurtooda oo dugsiga la joogta carruurta qoysaska ay u shaqeynayaan inay u adeegaan, waxaa jiri kara hakad badan ka hor inta aan loo qaadan waxa ugu xun ee laga shakisan yahay, iyo in la adeegsado xoog wax dila. Sida iska cad, isku soo wada duuboo tan ayaa ah in ciidamada "nabaddu" ay la mid noqdaan bulshada ka kooban isir / jinsi / jinsi, jinsi, iyo noocyo kale oo kala duwanaansho ah. Saraakiisha nabaddu waa inay noqdaan kuwo matala isla markaana la xisaabtami kara — waana mid si weyn uga duwan dastuurka hadda jira ee inta badan ciidamada booliska adduunka oo dhan xilligan. Iyo, booliska waa in lala xisaabtamaa markay sharciga ku xad gudbaan; meelo badan, oo ay ku jiraan Mareykanka, “difaac difaac leh”Sharciyada ayaa ka dhigaya wax aan macquul aheyn in sarkaal boolis ah la horkeeno cadaalada kiisaska isticmaalka xad dhaafka ah ee xoogga iyo rabshadaha dilaaga ah.
Waxaan fursad u leenahay inaan dib ula bilawno "nabadeyntii" bulshada xilligan la joogo ee milicsiga xagjirnimada iyo isbadalka. Hadday nabaddu tahay yoolkeenna, markaa waa inaan fahamno oo aan hubinno gadaasheeda oo ah caddaaladda. Qeybta caalamiga ah ee waxbarashada nabada waxay leedahay aragtiyo iyo aragtiyo hodan ah oo lagu bixinayo dib u habeynta nidaamka booliska iyo tababarka saraakiisha. Saraakiisha nabada waa in loo hayaa heer sare runtiina ay ilaaliyaan oo ay horumariyaan nabada bulshada ay u adeegaan.
* Qoraalkani wuxuu ka soo jeedaa qaab-dhismeedka aqoonta nabadeed ee muhiimka ah ee lagu soo saaray maqaalka "'Pedagogies of Resistance' Critical Peace Education Praxis," oo la heli karo halkan.
Monisha Bajaaj waa borofisar ku takhasusay waxbarashada caalamiga ah iyo kuwa dhaqamada kala duwan ee Jaamacadda San Francisco. Dr. Bajaj waa tifaftiraha iyo qoraaga toddobo buug, iyo weliba maqaallo badan oo ku saabsan waxbarashada nabadda iyo xuquuqda aadanaha, iyo socdaalka iyo waxbarashada. Dr. Bajaj wuxuu diyaariyey manhaj — gaar ahaan la xiriira waxbarashada nabadda, xuquuqda aadanaha, dadaallada ka hortagga xoogsheegashada iyo joogtaynta — ee loogu talagalay ururada aan macaash doonka ahayn iyo ururrada dawliga ah, sida UNICEF iyo UNESCO. Sannadkii 2015, waxay ka heshay Abaalmarinta Ella Baker / Septima Clark Xuquuqda Aadanaha (2015) Qaybta B ee Ururka Cilmibaarista Waxbarashada Mareykanka (AERA). Hadalkeeda TedX waa la heli karaa halkan.
# dib u habeynta booliska
# tababarka booliska
Ku dhawaaqida Bilaabista Machadka Dumarka ee Daraasaadka Nabadda ee Peace MOMO (S. Korea)
Qaxootiga iyagoo gacan ka geysanaya Nabadda
March 4, 2016 Warar & Muuqaal 0
Qaxootiga ayaa marar badan loo arkaa inay yihiin dad si dhib yar u hela natiijooyinka lagu gorgortamo meelaha fog ee awooda. Waxay leeyihiin taariikhda oo kaliya marar dhif ah in lala tashado ama lagu matalo howlaha nabada, iyo dadaallada dhisidda nabadda ayaa inta badan layareeyaa Diidmada danaha qaxootiga ayaa laga yaabaa inay gebi ahaanba burburin ku sameyso geeddi-socodka nabadda - halkaas oo aan la damaanad qaadin fursadaha ka-qaybgalka siyaasadeed, qaxootiga ku sugan masaafuriska waxay halis ugu jiraan inay siyaasad ahaan xun ama millateri noqdaan. Barnaamijyada waxbarashada nabada ee qoxootiga dibeda ku jooga ayaa kor u qaadi kara rajada dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka markay soo noqdaan. Tusaale ahaan, dadka soo noqday waxay sifiican u qalabayn doonaan si ay ula heshiiyaan xubnihii hore ee bulshada una dhex dhexaadin lahaayeen khilaafaadka inta lagu gudajiray khilaafaadka iyo dib udejinta. Runtii, dhowr jeer, Guddiga Fulinta ee UNHCR wuxuu xoogga saaray waxbarashada nabadda iyo dhiirrigelinta dhaqanka nabadda. [sii wad akhriska…]
Macallimiinta: Wakiillada Dhismaha Nabadda ee Aagagga Colaadaha
Waxaa laga yaabaa 24, 2016 opinion 0
Dr. Swaleha Sindhi waxay soo jeedinaysaa in xaaladaha ay isku dhacyadu saameeyeen waxbarashadu ay ku saabsan tahay in ka badan bixinta adeegga; waa hab bulsheed iyo horumar aqoonsi iyadoo loo marayo gudbinta aqoonta, xirfadaha, qiyamka iyo dabeecadaha jiilalka oo dhan. Sidaas darteed waxbarashadu waxay noqon kartaa waddo ka qayb qaadata isbeddelka khilaafaadka iyo dhisidda nabadda. [sii wad akhriska…]
Trump Syllabus K12: Qorshooyinka Casharka ee Waxbarista Inta lagu jiro Da'daan Cusub ee Iska Caabinta (# TrumpSyllabusK12)
# TrumpSyllabusK12 waa isku soo uruurinta qorshooyinka casharka oo ay qoreen iyo macalimiinta fasalada K-12aad (iyo barayaasha kuliyada) si loo baro ololaha madaxtinimada ee 2016; ku saabsan iska caabin iyo kacaan; ku saabsan mudnaanta caddaanka iyo sarraynta caddaanka; ku saabsan rabshadaha ay dowladu fasaxday iyo fasalada barakaysan; ku saabsan wararka been abuurka ah iyo Facebook; iyo, xorriyadda iyo caddaaladda. Waxaa loogu talagalay in loogu badalo fasaladeena meelo xorriyad-doon ah oo ka soo horjeedda midab-takoor-naceyb aan sinnaba lahayn oo aan lahayn xuduud ama xuduud. Waxaa loola jeedaa in la xoreeyo oo la sii daayo ardaydeena iyadoo la siinayo qorshooyin cashar si looga hortago inay noqdaan mufakiriin caalami ah. [sii wad akhriska…]
Rosemarie Stallworth-Clark wuxuu leeyahay,
July 22, 2020 at 7: 01 pm
Aad baad ugu mahadsantahay maqaalkan. Waxaan kula wadaagay Feedhkeyga Wararka waxaanan ka codsaday saaxiibbaday inay akhriyaan. Waxaa la joogaa waqtigii aan ku sii socon lahayn Wicitaanka Weyn-'BARNAAMIJKA DHULKA, WANAAGSAN OO DHAMAN!'